जुम्लामा माओवादीको अग्रता, कांग्रेसलाई पच्छाउँदै नेमकिपा
जुम्ला २१ मंसिर– जुम्लामा नेकपा माओवादी केन्द्रले शुरुवाती अग्रता लिएको छ । माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महतले ४३८ मत प्राप्त गर्दा नेपाली काँग्रेसका देवेन्द्र शाहीले ३१२ र नेमकिपाका डिल्ली काफ्लेले १५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
समानुपातिकमा एमाले र कांग्रेसको मत प्रतिशत घट्यो, विवेकशीलले ४ सीट पाउला ?
नयाँ सरकार गठनका लागि ओली र प्रचण्डको सक्रियता, देउवाले के गर्लान् ?
ओली सरकारमा माओवादीको नेतृत्व कसले गर्ला ?
बिना मगरले चुनाव जितेको क्षेत्रमा माओवादी पहिलो पार्टी, एमाले तेस्रो स्थानमा
पूर्वपञ्चहरूको अस्तित्व संकटमा, नफुटेको भए राप्रपाले थ्रेसहोल्ड कटाउँथ्यो ?